Kungani Ungeke Ukopishe nje i-Amazon.com | Martech Zone
Ithimba leTuitive lisazama ukuhlala phansi ngemuva kwalo nyaka INingizimu NgeNingizimu Ntshonalanga Iyasebenzisana (SXSWi) inkomfa ngoMashi. Sonke sibe nesikhathi esimnandi futhi safunda okuningi ngomphakathi osebenzisanayo nokuthi yini elandelayo. Kube nezikhathi eziningi ezithakazelisayo ezivela kuphaneli nethimba le-Gmail kuya
Ukupheka amaNerds, iningi lawo ebelivele livela ku-inthanethi. Bengifuna ukuhlanganyela enye yezintandokazi zami nawe.
Ukudalula Amagugu Wokwakha aqhamuka e-Amazon nguJared Spool
UJared Spool ungumholi emhlabeni Wokuhlangenwe nakho Komsebenzisi, ikakhulukazi esikhungweni socwaningo lobuningi. Ubelokhu esebenza naye Amazon.com iminyaka eminingi, kuhlaziywa amaphethini abo omgwaqo nokuzama ukuthuthukisa ulwazi lwabasebenzisi be-Amazon abathengi. Inkulumo yakhe ibinamaphuzu amabili abalulekile.
Uveze izinto ezithokozisayo ezenziwa yi-Amazon ngezici ezintsha nokusebenzisa njalo izinguquko ezincane ukuthuthukisa ulwazi lomsebenzisi.
Ubuye waxoxa nokuthi awukwazi ukwenza izinto ezifanayo ne-Amazon futhi ulindele ukuphumelela.
Kungani sonke singakwazi ukukopisha i-Amazon? Ngegama elilodwa elithi "traffic."
I-Amazon ibe nezivakashi ezingama-71,431,000 kusukela ngoDisemba ka-2008. Basebenzise amakhasimende angama-76,000,000 selokhu baqala. Kunama-oda angama-24 abekwa njalo ngomzuzwana. Ngabe iwebhusayithi yakho inayo leyo hlobo lwezinombolo zomgwaqo?
Isibonelo esihle kunazo zonke uJared asisebenzisayo ukubuyekeza okwenziwe ngumsebenzisi. Iningi labantu lithola ukubuyekezwa kuwusizo olukhulu lapho uthenga ku-inthanethi, futhi ukubuyekezwa komsebenzisi ku-Amazon kuthathwa kakhulu. Ngakho-ke kungani ungavele ungeze izibuyekezo zomsebenzisi kusayithi lakho? UJared ucaphuna ucwaningo olukhombisa ukuthi kunezibuyekezo ezingaphansi kwezingama-20 ngomkhiqizo akusizi kangako ukuthi abantu banqume ukuthi ngabe umkhiqizo yilokho abafuna yini. Kwezinye izimo kunciphisa empeleni umbono omuhle wento.
Uyaqhubeka nokwaba ukuthi cishe umthengi oyedwa kwabangu-1 empeleni obhala isibuyekezo. Cabanga ngokuthi ubhale kangaki ukubuyekezwa okuku-inthanethi ngokuqhathanisa nokuthi ufunde kangaki. Ngakho-ke ukuze uthole lokho kubuyekezwa okungama-1,300 okusiza ukuthengiswa kwento uzodinga ukuba nabantu abayizigidi eziyi-20 bathenge into. Hawu.
Ngiyakukhuthaza ukuthi ubuke Isethulo sikaJared (bona ngezansi). Uhlakaniphe kakhulu futhi ulaleleka kalula.
Ngiyakukhuthaza futhi ukuthi uqiniseke ukuthi uhlala uthuthukisa imikhiqizo yakho eku-inthanethi ngezindlela ezenza umqondo omkhulu kusayithi lakho elithile. Yonke isayithi yehlukile, inabasebenzisi abahlukile futhi labo basebenzisi banezidingo ezihlukile. Asikho isici se-bullet semilingo sempumelelo ku-inthanethi. Ukuphela kwendlela yokuqinisekisa ukuthi impumelelo yakho ukulalela abasebenzisi bakho, futhi uthuthuke ngokuqhubekayo amathuluzi abawadingayo ukuqedela imisebenzi yabo.
Tags: Amazonezokuhweba ngekhompyuthatekutsengisaIzikhungo
I-New Media Manifesto